मेरो ब्वाइफ्रेन्ड किन छैन ? - बलिउड - साप्ताहिक
मेरो ब्वाइफ्रेन्ड किन छैन ?
गत शुक्रबार आफ्नो २९ औं जन्मदिन मनाएकी कृति सेनले आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड किन छैनन् भन्ने कुराको खुलासा गरेकी छिन् । गत शुक्रबार नै सार्वजनिक भएको उनको चलचित्र अर्जुन पटयालाको प्रेस कन्फरेन्सका अवसरमा कृतिले आफ्नो को–स्टार बरुण शर्माका कारण आफू सिंगल रहनुपरेको बताएकी हुन् ।
त्यस क्रममा कृतिले फुकरे स्टार बरुण शर्माले आफूसँग प्रपोज पनि नगरेको र आफूलाई अरुसँग पनि देख्न नचाहेको बताएकी थिइन् । कृतिले बरुण शर्मा आफूप्रति यसरी प्रोटेक्टिभ हुनुको कारण आफूले अहिलेसम्म थाहा नपाएको दाबी समेत गरेकी छिन् ।
उक्त अवसरमा कृतिले भविष्यमा आफू कसैसँग इंगेज भए त्यो आफ्नो नीजि कुरा हुने बताएकी थिइन् ।
प्रकाशित :श्रावण २३, २०७६
एसिड आक्रमणमा परेकी दीपिका भन्छिन्, ‘नाक छैन, कान छैन, झुम्कि कहाँ अड्काउने ?
न्यूड सिनमा छैन पश्चाताप
सन्तान जन्माएपछि महिनावारी किन ढिलो  हुन्छ
यौन क्रिया किन पीडादायक ?
समलिङ्गी यौन सम्बन्ध किन हुन्छ ?
कसको पारिश्रमिक कति ? मंसिर २५, २०७६
एसिड आक्रमणमा परेकी दीपिका भन्छिन्, ‘नाक छैन, कान छैन, झुम्कि कहाँ अड्काउने ? मंसिर २४, २०७६
‘बा’ बने कपिल शर्मा मंसिर २४, २०७६
आमिर खानको एउटा भाइरल लुक मंसिर २३, २०७६
घर फर्किइन् लता दिदी, भनिन्, 'तपाईहरुको माया र प्राथनाले ठिक भएकी छु' मंसिर २३, २०७६
बलिउड आउनु अघि कियारा आडबाणी के गर्थिन् ? मंसिर २०, २०७६
अनु मलिकको ठाउँमा हिमेश रेशमिया मंसिर १९, २०७६
भाग्यमानी आयुष्मान मंसिर १६, २०७६
बलिउड छोड्ने अमिताभ बच्चनको संकेत मंसिर १६, २०७६
सलमान खानका अनेक किस्सा मंसिर १४, २०७६